Kasbasho dabacsanaan | Ragga Stylish
Markii aan bilaabayno nooc kasta oo tababar ah, ha ahaato xoog, iska caabin ama qaab ahaan qaab ahaan, waxaan u baahanahay inaan yeelano dabacsanaan wanaagsan. Dabacsanaanta waa awoodda noo ogolaaneysa inaan kala bixinno murqaha dajiya xiisadaha jirka iyadoo la ilaalinayo dhammaan dhaqdhaqaaqa kala goysyada. Tani waxay na siinaysaa faa'iidooyin kala duwan sida ka hortagga cuduro badan iyo dhaawacyo suurtagal ah. Waa muhiim in wax la barto hel dabacsanaan oo leh jadwal kuu fudud oo aad raacdo oo aan caajis lahayn.
Sidaa darteed, waxaan u gogol xaaraynaa maqaalkan inaan kuu sheego sida aad ugu kasban karto dabacsanaanta barnaamijka tababarka.
1 Hesho dabacsanaan inta lagu jiro fidinta
2 Kululaynta guud
3 Jimicsiyada si loo helo dabacsanaan
3.1 Layli 1
3.2 Layli 2
3.3 Layli 3
4 Ku kasbato dabacsanaanta jirka hoose
4.1 Layli 1
4.2 Layli 2
Hesho dabacsanaan inta lagu jiro fidinta
Kala-bixinta waa in la sameeyaa ka hor iyo ka dib bilowga tababarka caadiga ah. Tan awgeed waxaan ku fidin karnaa muruqyada, dejin karnaa isku-buuqa jirka ku jira oo aan ilaalinaa dhaqdhaqaaqa kala-goysyada. Tan waxaan ku helaynaa faa'iidooyin sida hagaajinta waxqabadka jimicsiga xiga oo ka fogow dhaawacyada.
Kala-bixinta awgeed, xoogga muruqyada waa la horumarin karaa iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah inaan yeelan karno dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Qiyaasta dhaqdhaqaaqa ee jimicsiga ayaa ah mid ka mid ah doorsoomayaasha la tixgelinayo marka lagu sii socdo jimicsiga. Sidaa darteed, haddii aan baranno helitaanka dabacsanaanta, waxaan gaari doonnaa natiijooyin wanaagsan. Waxaan sidoo kale yareyneynaa halista dhaawaca annaga oo baabi'inayna murqaha iyo murqaha wadajirka ah.
Lo primero waa in la kululeeyo ilaa 5 daqiiqo si jirka looga dhigo heerkul sareeya iyo muruqyada iyo kala-goysyada labadaba waa loo diyaarin karaa dadaalka. Waxaan soo jeedin doonnaa barnaamij tababar si aan ugu helno dabacsanaan talaabo talaabo ah.
Si loo kululeeyo waa inaan tixgelinaa fidinta. Jimicsiga ugu horreeya ee naga caawiya kululaynta waa kuwan soo socda:
Waxaan ku neefsaneynaa oo kor u qaadnaa gacmaheena si wadajir ah madaxa. Waxaan sii deyneynaa hawada oo waan dejinaynaa gacmaheena. Waxaan u gudbin doonnaa ficilkan ugu yaraan 7-8 jeer.
Kuwa soo socdaa waa wax la mid ah. Waan neefsaneynaa, gacmaheena kor uga taagnaa madaxeena waxaanuna ku taaganahay ciribta. Waxaan sii deyneynaa hawada, waxaan hoos u dhigeynaa gacmaheena waxaanna u laabaneynaa dhanka hore. Waxaan ku celcelinaa dhaqdhaqaaqa illaa 5 jeer.
Jimicsiga ugu dambeeya ee lagu kululeeyo waa inaad ku neefsato adoo gacmahaaga madaxaaga ka saraynaya. Waxaan ku taaganahay sinta lugta si aan ugu tiirsanaano jirida gebi ahaanba inta aan awoodno. Waxaan ka dhigi doonnaa tallaabadan mid gaabis ah intii suurtagal ah. Waa inaan aragnaa waxa xadkayagu yaryahay. Haddii aan dhaqso u sameyno jirridda waxaan ka dhigi karnaa dhabarka hoose xanuun. Waxaan kor ugu kacnaa lafdhabarta si aan si tartiib tartiib ah Sidan ayaan ku soo kabaneynaa booska hore.
Kahor intaanan bilaabin jimicsiga fidinta, waxaan sameyn doonaa xoogaa jimicsiyo dhaqdhaqaaq wada jir ah si markaa jirku u bilaabo inuu kordhiyo heerkulkiisa. Leyligaan waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Wareegyada canqowga iyo garabka
Dhaqdhaqaaqa feedhka ee fulinaya curcurada.
Waxaan kor u qaadi doonnaa garbaha oo waxaan qaban doonnaa dhaqdhaqaaqyo iyo wareegga sinta
Qoorta ayaynu dhaqaajinnaa annaga oo aan is dhaawicin
Jirka ayaan u janjeernaa midig iyo bidix
Jimicsiyada si loo helo dabacsanaan
Waxaan arki doonnaa nidaam joogto ah oo gacan ka geysta hagaajinta dabacsanaanta jirka oo dhan. Helitaanka dabacsanaan waa inay noqotaa himilada muddada-dheer haddii aan dooneyno inaan horumarinno waxqabadkeenna tababarka.
Waxaan ku bilaabaynaa xoogaa fidin ah oo ah qaybta dambe. Layliga ugu horreeya wuxuu ku saabsan yahay gadaal u rogaal celinta gadaal gadaal u janjeera. Jimicsiga noocan ah muruqyada dambe ayaa lagu shaqeeyaa. Waxaan fuuli doonnaa afarta lugoodba annagoo gacmaha saareynaeyno garbaha hoostooda. Ballaca waa inuu ahaadaa midka garbaha. Jilbaha waa inay ka hooseeyaan miskaha illaa ballaca miskaha. Waa inaan hubinnaa haddii aan leenahay dhabarka toosan. Marka xigta, Waxaan dhiirrigelinaynaa inta ay odayaashu soo noqonayaan. Waan neefsaneynaa oo dhabarka ayaan u laabnaa gudaha. Waa inaan dareennaa sida laf-dhabarku u dhaqaaqayo. Waxaan ku celcelineynaa dhaqdhaqaaqan qiyaastii 5 jeer.
Ujeedada ugu weyn ee layligani waa in si buuxda loo kordhiyo jirida. Halkan waxaan ku shaqeyn doonaa adoo kala bixinaya maqnaanshaha iyo dhammaan dabacsanaanta dhabarka. Waxaan hoos u dhigi doonaa nafteena wejiga iyadoo gacmaheena ku xigi doonaan laabta. Waa inaan sameyno tilmaam sidii aan dooneyno inaan dhulka u riixno si aan kor ugu qaadno jirkeena. Jagadan waxaa loo yaqaanaa tan cobra. Garbaha ayaan iska tuuraynaa oo horay ayaan u fiirineynaa. Waa inaanan ku qasbanaan xoog wax ku muquuninta. Haddii aad dareento xitaa qanjo yar oo dhabarkaaga hoose ah, waa wax xiiso leh in lakala fogeeyo bowdooyinka xoogaa. Waxaan joogi doonaa booskan ugu yaraan 30 ilbiriqsi. Waxaan tan sameyn doonaa qiyaastii 5 jeer.
Layligan waxaa loo yaqaannaa muuqaalka ilmaha. Waxaa lagu shaqeeyaa fidinta iyo nasashada dhabarka oo dhan gebi ahaanba. Waxaan isku taagnaa badhida cagaha cagaha waxaana gacmaheena ku jiidaneynaa sida ugu macquulsan jihada hore. Waxaan calaacasha gacanta dhulka ku hayn doonnaa marwalba iyadoo farahana aan u jeedin doono. Waxaan qaadan doonaa dhiirigelin iyo dhicitaan ilaa aan ka kala bixinno gacmaheena si aan u kala bixinno lafdhabarta sida ugu macquulsan. Waxaan ilaalin doonnaa booskan illaa 30 ilbiriqsi waxaanan jimicsiga ku sameyn doonnaa illaa 3 jeer.
Ku kasbato dabacsanaanta jirka hoose
Waxaan arki doonnaa layliyo qaarkood si aan ugu kasbano jirka hoose.
Layligani wuxuu ka kooban yahay fiditaan iyo gluts. Waxaan iska dhigeynaa nafteena jiifa waxaanan canqowga saari doonaa jilibka ka soo horjeeda oo waxaan qaban doonaa dhabarka bowdada ama tibia. Waxay kuxirantahay heerka dabacsanaanta waxaad sameyn kartaa hal shay ama mid kale. Waa inaad nasisaa inta ka hartay jirkaaga sare inta lagu kala bixinayo. Waannu neefsan doonnaa oo aan soo bixi doonnaa inta aannu jilibka u keeneyno laabta. Waxaan sameyn doonaa layligan qiyaastii saddex jeer mid kasta oo soconaya 30 ilbiriqsi dhinac kasta.
Halkan waxaan isku dayi doonaa inaan kala saarno soo-saareyaasha. Waxaan ku fidin doonaa sariir. Layligu wuxuu ka kooban yahay fidinta lugaha inta ugu badan ee suurtogalka ah iyadoo la ilaalinayo xiriirka darbiga. Waa inaan dareemeynaa qeybta hoose ee bowdyaha inay fidsan yihiin. Waxaan ilaalin doonnaa booska illaa 30 ilbiriqsi waxaanna jimicsiga ku sameyn doonaa qiyaastii 3 jeer.
Waxaan rajeynayaa in layliyadaan aad kuheli karto dabacsanaan joogto ah si aad uhormariso waxqabadka tababarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Kasbasho dabacsanaan